Dingana 3 mankany amin'ny valin'ny krizy media sosialy mahomby | Martech Zone
Alakamisy 15, 2012 Talata, Novambra 13, 2012 Douglas Karr
Nanana fifanakalozan-kevitra mahafinaritra izahay niaraka tamin'i Steve Kleber avy any Kleber & Associates, masoivoho iray mifantoka amin'ny sehatry ny fananganana trano. Ny iray amin'ireo lohahevitra noresahina dia ny tahotra tsy maintsy resin'ny orinasa rehefa miatrika media sosialy. Zava-dehibe ny fanekena fa rehefa misy krizy - tsara kokoa ny eo an-tampon'ny valinteninao amin'ny media sosialy toy izay tsy ho eo mihitsy.
Ny dingana 3 mankany amin'ny valin'ny krizy
Apetraho avy hatrany amin'ny mora ilay mpanjifa fantaro ny olan'izy ireo. Raha ny marina dia avereno aminy izany mba hahafantaran'izy ireo tanteraka fa azonao izay tsy mety. Raha milamina ny fanazavana dia hitranga eo io. Te hahafantatra ny mpanjifa fa mihaino ianao… ary manana fotoana iray hamahana ity olana ity ianao, ka alaivo antoka fa azonao izany!
Hamarino tsara fa izy ireo fantaro fa miahy ianao. Amin'ny famaliana sy fampahafantarana azy ireo fa mikarakara azy ireo manokana ianao, dia azonao atao ny mampihena ny hamafin'ny olana ary manamboatra azy io. Tsy marika tsy manam-bola intsony ianao, olona azonao atokisana izy ireo manandrana manamboatra ny olanao.
Amboary ny olana. Aza manome taratasy, nomeraon-telefaona na adiresy mailaka hifandraisana amin'izy ireo. Tsy maintsy alaminao ny olana. Ianao. Raha esorinao amin'ny olona manaraka io olona io dia ho fantatry ny olona avy hatrany ianao hoe iza ianao… telefaonina iray. Raha azonao sy miahy ianao dia hanaraka sy hamantatra fa voavaha ny olana.
Tsy milaza izany ianao fa ianao manokana dia mila manitsy ny olana. Midika izany fa ianao no mpitarika sy olona tompon'andraikitra amin'ny mpanjifa na fanantenana. Anjaranao ny mitondra an'io olona io amina vahaolana. Raha manary sy mihazakazaka fotsiny ianao dia hiteraka olana bebe kokoa. Tsy ankafizinao ny olona manao an'izany rehefa manana olana ianao… nahoana ianao no hanao izany amin'ny mpanjifanao manokana?
Teny farany momba an'ity. Rehefa voavaha ny olana dia nahavita ny iray amin'ireo fanentanana tsara indrindra natombokao ianao. Raha avelanao ho sambatra sy afa-po io olona io, dia inoana fa hizara izany fahombiazana izany amin'ny tamba-jotra izy ireo. Zavatra mahafinaritra izany.
Tags: fitantanana krizykrizy ara-tsosialyhaino aman-jery sosialykrizy amin'ny media sosialy
Fampisehoana: Ahoana ny fomba hanamafisana ny hetsikao
21 Nov 2012 amin'ny 4:13 maraina
Tena ara-potoana ity lahatsoratra bilaogy ity satria vao avy namaky ny 'Brand Resilience' aho. Torohevitra tsara eto izay azonay omena ny mpanjifanay
30 Nov 2012 amin'ny 2:02 maraina
Torohevitra manaitra ary misaotra betsaka tamin'ny fizarana an'ity. Azo antoka fa fanampiana lehibe ho an'ny rehetra izany. Niasa tsara!